विदेशबाट नेपालीको शव ल्याउँदा जस्तो पीडा अरु उडान गर्दा हुन्न’ : क्याप्टेन विजय लामा
July 24, 2021 N88LeaveaComment on विदेशबाट नेपालीको शव ल्याउँदा जस्तो पीडा अरु उडान गर्दा हुन्न’ : क्याप्टेन विजय लामा
काठमाडाैं । विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरुको विभिन्न कारणले ज्यान जाने गरेको छ। मुख्य गन्तव्य मुलुकहरुमा कहिले दुर्घटनामा, कहिले निरासाजनक अवस्थाबाट पार पाउन आफैं मृत्यु रोज्ने जस्ता घटना हुने गरेका छन्। त्यसरी विदेशमा ज्यान गुमाउनेहरुको शव सकेसम्म नेपाल ल्याएर परिवार, आफन्तको जिम्मा लगाउने गरिएको छ। यसै क्रममा शनिबार बिहान २४ जना नेपालीको शव र तीनजनाको […]
अनियमित महिनावारीको समस्याबाट मुक्ति पाउन के गर्ने ? जानीराखाैँ
July 24, 2021 N88LeaveaComment on अनियमित महिनावारीको समस्याबाट मुक्ति पाउन के गर्ने ? जानीराखाैँ
महिनावारीमा अनियमितता हुने भएका कारण कुनै पनि महिलाका विशेषगरी किशोरीहरुका लागि महिनाका ती दिनहरु निकै तनावपूर्ण र पीडादायक हुने गर्दछ । आधुनिक जीवनशैली, वातावरणीय प्रदुषण र शहरी खानपानमा आएको परिवर्तनका कारण धेरैजसो किशोरीहरुलाई महिनावारी भएका बेला अत्यधिक पीडाको महशुस हुनु र दैनिकी तनावपूर्ण हुनु अहिले सामान्य भइसकेको छ । निकै चिसो खाना खानाले महिनावारी नियमित […]
July 24, 2021 N88LeaveaComment on ३१ वर्षमा २८ प्रधानमन्त्री, कसैको पनि ४ वर्ष कटेन
काठमाडौं । नेपालमा २०४७ सालयता २८ पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भएको छ । तर, कुनैपनि प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको पूरा कार्यकाल अर्थात् ५ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन् । सबैभन्दा बढी समय गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ साल देखि २०५१ सालसम्म ३ वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री बनेका थिए । बहुदल आएपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बनेका उनले ५ वर्ष […]
July 24, 2021 N88LeaveaComment on बिपी कोइरालाको शवयात्राको दुर्लभ भिडियो
सन्ताेष खडेरी ३९ वर्षअघि आजकै दिन वि.सं. २०३९ साउन ०६ (तदनुसार सन् १९८२ जुलाई २१) का दिन नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष बिपी कोइरालाको ६८ वर्षकाे उमेरमा निधन भएको थियो। बिपी कोइरालाको जन्म वि.सं. १९७४ (सन् १९१४ सेप्टेम्बर ८) मा पिता कृष्णप्रसाद कोइराला एवं माता दिव्या काेइरालाकाे सन्तानका रुपमा भएको थियो। सन् […]
२० मन्त्रीका लागि १५६ सांसद दौडमा, यी हुन् सम्भावित नयाँ मन्त्री
July 24, 2021 N88LeaveaComment on २० मन्त्रीका लागि १५६ सांसद दौडमा, यी हुन् सम्भावित नयाँ मन्त्री
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन जोगाउन मुश्किल पर्ने संकेत गरेका छन् । उनले गठबन्धन भत्काउने कोशिश हुन थालेको मात्र भनेनन् आफ्नै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएर व्यवस्थान कठिन भएको खुलासा गरेका छन् । प्रचण्डले ४९ जना सांसदमध्ये सबैजसो मन्त्रीका आकांक्षी भएको खुलाए । माओवादीबाट अहिले सरकारमा २ जना मन्त्री छन् । उसले […]
राजीनामा फिर्तासँगै रावलले गरे गुट फेरे, ओलीले दिने भए यस्तो जिम्मेवारी !
July 24, 2021 N88LeaveaComment on राजीनामा फिर्तासँगै रावलले गरे गुट फेरे, ओलीले दिने भए यस्तो जिम्मेवारी !
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलको कित्ता परिवर्तन भएको छ । लामो समय एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको साथमा रहेका उनी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कित्तामा पुगेका हुन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार रावलले एमालेमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । उनलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने गरी ओलीले पक्षमा पारेका हुन् । रावलले यसअघि सांसद […]
वैद्यको प्रस्ताव प्रचण्डद्वारा स्वीकार, हुँदैछ बृहत पार्टी एकता
July 24, 2021 N88LeaveaComment on वैद्यको प्रस्ताव प्रचण्डद्वारा स्वीकार, हुँदैछ बृहत पार्टी एकता
काठमाडाैं । नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले संसदमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टी र सडकमा रहेका कम्युनिष्ट पार्टी एकजुट भएर जान आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार ४३ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान संकट र आगामी बाटो विषयक प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा धेरै कम्युनिष्ट पार्टी हुनु आवश्यक नभएको बताउदै संसदवादी दलहरुबीच एकता […]
बालकोट पुगेपछि ओलीको फोन कसैले उठाएन, क-कसलाई गरे दिनभर ?
July 24, 2021 N88LeaveaComment on बालकोट पुगेपछि ओलीको फोन कसैले उठाएन, क-कसलाई गरे दिनभर ?
काठमाडाैं । बलेको आगो ताप्ने दुनिँया न हो यो । सत्ता र शक्तिमा हुँदा चाकडी गर्ने दुनिँया जब सत्तामा हुँदैन तब उस्लाई भाउ दिन छाड्छ । केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरे । जस्लाई सर्वाेच्चले उल्टाइदिए पछि उनी वालुवाटारबाट अहिले वालकोट पुगेका छन् । जसै ओलीको ओरालो यात्रा शुरु भएर वालुवाटारबाट बालकोटमा […]
भीम रावल ओली समूहमा लागेका हुन् ?
July 24, 2021 July 24, 2021 N88LeaveaComment on भीम रावल ओली समूहमा लागेका हुन् ?
काठमाडाैं । एमाले नेता शंकर पोखरेलले पार्टीका उपाध्यक्ष भीम रावल अध्यक्ष केपी ओली समूहमा लागेको अर्थ लाग्नेगरी बचाउ गरेका छन् । सांसद पदबाट राजीनामा दिएर फिर्ता लिएका उपाध्यक्ष भीम रावलको कट्टर आलोचक देखिएका पोखरेलले अहिले भने प्रतिरक्षा गरेका छन्। उनले रावल पार्टी विभाजनको विपक्षमा लागेकोले उनको अहिले विरोध भैरहेको भन्दै त्यसलाई ‘रोइलो’ को संज्ञा दिएका […]
मलेसियाबाट एकै दिन २४ वटा शव नेपाल ल्याइयो, कस-कसकाे हाे ?
July 24, 2021 N88LeaveaComment on मलेसियाबाट एकै दिन २४ वटा शव नेपाल ल्याइयो, कस-कसकाे हाे ?
काठमाडाैं । मलेसियाबाट २४ जना नेपालीको शव ल्याइएको छ। राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को जहाजले मलेसियाबाट शव नेपाल ल्याएको हो। निगमको वाइडबडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीनवटा अस्तु नेपाल ल्याएको हो। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीको शव बिहान वाइडबडी जहाजमार्फत […]